अबको संसदमा दुई थरी दल, कति मत पाउनेलाई राष्ट्रिय मान्यताको दल ? — Motivate News
अबको संसदमा दुई थरी दल, कति मत पाउनेलाई राष्ट्रिय मान्यताको दल ?
Posted on December 6, 2017 by Ghanshyam Shrestha
मंसिर २० ,काठमाडौं – नयाँ संघीय संरचनाअनुसार अब बन्ने केन्द्रीय संसद्मा दुई थरी राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गर्दैछन् ।
तीन प्रतिशत थ्रेस होल्डका कारण एक थरी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल र अर्को थरी सामान्य राजनीतिक दलका हैसियतमा प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व हुनेछन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा दलहरुले प्राप्त गरेका मतका आधारमा दलहरुको हैसियत निर्धारण हुँदैछ ।
अवको संदमा एक सिट प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेछन् ।, आजकोनागरिकमा भाषा शर्माले यो खबर लेखेका छन् ।